Thwebula Uplay 1.3.26 – Android – Vessoft
Uplay – client of a esitolo digital of developer aziwayo futhi umshicileli yenkampani video game Ubisoft. Uplay ikuvumela ukuba uthenge amakhophi digital of imidlalo ezakhiwa noma enyatheliswa inkampani. Isofthiwe kwenza ukulanda amademo wemikhiqizo amaprojekthi kanye imidlalo, ukuthi kusakazwe model of Free4Play. Uplay ikuvumela ukuba ukudlala imidlalo nabangani noma abanye mode yabadlali abaningi. Isofthiwe ine imali yangaphakathi yokuthenga imidlalo angathengwa ngemali yangempela noma uthole benze ukukhushulwa noma imincintiswano ehlukahlukene.
Ikhono ukuthenga amakhophi digital imidlalo
Umdlalo in mode yabadlali abaningi
Presence ukukhuphula ezahlukene nemincintiswano
Amazwana on Uplay:
Uplay Ahlobene software: